Delta Mhepo Lines inowedzera makumi matatu neshanu akashandisa Airbus neBoeing jets kuzvikepe pakati pekukwira kwekuda kwekufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Mhepo Lines inowedzera makumi matatu neshanu akashandisa Airbus neBoeing jets kuzvikepe pakati pekukwira kwekuda kwekufamba
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
COVID-19 denda rakapa mukana wekurerutsa zvikepe zveDelta uye nekumhanyisa kuenda pamudyandigere kwema 18 widebody 777s, uye MD-88 ne MD-90 narrowbody fleets, ese ari ekare uye asinganyatso shanda.
Denda rakapa Delta mikana yakasarudzika yebhizimusi yekuwedzera nyowani dzezvizvarwa ndege pamitengo inokwezva.
Delta yekuwedzera kuwedzera 29 yakashandiswa Boeing 737-900ERs uye 7 yakashandisa Airbus A350-900s kuita zvikepe.
Widebody fleet kuvandudzwa inobatsira kuti Delta ipore, uye ichabatsira kuisa Delta kuitira purofiti yakasimba uye kukura mune ramangwana.
Delta Mhepo Lines yapinda muzvibvumirano zvekuwedzera makumi maviri neshanu yakashandiswa Boeing 737-900ERs uye lease manomwe akashandiswa Airbus A350-900s sezvo ichiramba ichirerutsa uye nekuvandudza ngarava dzayo. Ndege makumi matatu neshanu dzinowedzera hunyanzvi hwekuvandudza mafuta nekuvandudza ruzivo rwevatengi, uku ichitsigira hurongwa hwekuvandudza zvikepe zveDelta hwakanangana nekurerutsa, kukura, saizi nekusimudzira.
"Idzi ndege ndedzekudyara mune ramangwana reDelta," akadaro Delta Air CEO Ed Bastian. "Sezvo isu tichitarisa kupfuura denda, kurangwa kweDelta, nzira nyowani yekuvandudza zvikepe isu chinzvimbo chekukura sekudiwa kwekufambisa, uku tichiwedzera ruzivo rwevatengi nekutsigira kuzvipira kwedu."
Denda reCOVID-19 rakapa mukana wekurerutsa zvikepe zveDelta uye nekumhanyisa kuenda pamudyandigere kwema 18 widebody 777s, uye MD-88 ne MD-90 narrowbody fleets, ese ari ekare uye asinganyatsoshanda. Iyo denda rakapawo yakasarudzika mikana yebhizinesi yekuwedzera nyowani yechizvarwa ndege pamitengo inokwezva.
Widebody fleet kuvandudzwa inobatsira kuti Delta ipore, uye ichabatsira kuisa Delta kuitira purofiti yakasimba uye kukura mune ramangwana. Se ndege inofambisa ndege yeDelta, iyo A350 inopa ruzivo rwevatengi hwepasi rose, inowedzera kugona kwemitoro, inoderedza mayuniti uye inopa kune ramangwana rakasimba.
Chizvarwa chinotevera A350s chinopisa 21 muzana zvishoma peturu pachigaro pane mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe avanotsiva. Kunatsiridzwa kwemafuta emafuta kwakakosha mukuedza kuri kuitwa neDelta kwekudzikisa kabhoni uye Nendege yeNet Zero. Kuwanikwa kwe777 narrowbody 29-737ERs zvakare kunobatsira zvikepe zveDelta zviripo.
Delta ichabhadharisa maA350s kuburikidza neAerCap uye yotenga makumi manomwe nemakumi manomwe nenomwe ema27-737ERs kubva kumari inotarisirwa naCastlelake, LP, nepo 900-737ERs maviri akasara achapihwa mari kubva kumari inotarisirwawo neCastlelake, LP Zvese zviri zviviri zvinoenderana nemamiriro ekuvhara. Kununurwa kwendege kuchapedzwa nekota yekutanga ya900, uye ivo vachazopinda mushando mushure mekugadziriswa kwapera.
Pamusoro peanomwe A350s ari chikamu cheichi chiziviso, Delta parizvino ine gumi nemashanu A15s mukushandira uye makumi maviri pahurongwa. Kuwedzeredzwa kweiyo 359 20-29ERs kunounza iyo yakazara ku737 mune yayo ngarava.
Chibvumirano ichi chinotevera danho raDelta muna Kubvumbi rekushandisa sarudzo pane makumi maviri neshanu eA25neo jets, ichatanga kuendesa gore rinouya. Ndege idzodzo dzinopa zvigaro zvepasi zvakaderera mumakungwa eDelta.
African Tourism Board "One Africa" ​​ikozvino ine ...